Sidee Loo Arkay Isku-Shaandhayntii Wasiirada DDS? - Xogtashacabka.com
Search...	Home About us Contact us Sidee Loo Arkay Isku-Shaandhayntii Wasiirada DDS?
Published on Thursday, 15 August 2013 12:09	Xogta Shacabka (Jigjiga) Dadweynaha caadiga ah iyo dadka siyaasada falanqeeya ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay isku-shaandhayntii dhawaan lagu sameeyay qaar kamid ah golaha wasiirada Kililka 5aad. Xogtashacabka ayaa isku soo dubariday warbixino ay soo direen wariyaasheena oo amuurta ka eegaya dhinacyo dhawr ah.
Marka laga fiiriyo dhanka raga awooda dawlada gadaanka wada haysta, waxay dadku ku tilmaamayaan in Cabdi Iley iyo Cabdulaahi Ethiopia kala qaybsadeen waliba C/laahi Ethiopia u gacanta ku dhigay xafiisyadii cun cunka badnbaa. Tusaale ahaan Ku xigeenadii C/laahi Ethiopia; Maxamed C/waxid oo ina adeerkii ah waxaa laga dhigay Madaxa Enterpriseka Biyaha, halka C/fataax oo Cabdi Iley isku reer yihiin uu noqday Maayar ku xigeenka Godey.
Gudoomiyaha Xisbiga Maxamed Rashid iyo Labada M/weyne Ku xigeen ee C/fataax iyo C/Xakiin ayay u muuqataa inaysan ka dhex muuqanin isku shaandhayntan.
Marka laga eego dhanka sida kooxaha loo kala yahay, waxay dadka badankii sheegayaan in dhaqaalihii wadanku gacanta u galay koox wadaado ah, iyo kuwa ay ugu yeedhaan qurba-joogta. Tusaale ahaan xafiiska Jidadka iyo shirkada Jidadka oo miisaaniyad aad u badan loo qabtay, waxaa la geeyay Maxamed Cumar iyo Guuleed Fooldher oo kooxda culimada kamid ah.
C/wahaab Rashid oo kamid ah kooxda qurbajoogta wuxuu gudoomiye u noqonayaa dhamaan shirkadaha DDS, sida Enterpriseka Biyaha oo madax looga dhigay Maxamed C/waaxid oo isku jeel yihiin.
Si kastaba ha ahaatee isku shaandhayntan ayaan wax sidaasi ah ka badalin xaalada siyaasadeed, inkastoo ay wasiiro badan dhagtu u taagantahay in isku badalku sii socon doono.